Murashaxiinta Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo is-diiwaangellinaya – Kalfadhi
Maamulka Koonfur-Galbeed ayaa isku diyaarinaya qabashada doorashada guddoonka Baarlamaanka ee dowlad-gobolleedka maamulkaasi, kaddib markii dhawaan lasoo dhisay xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee maamulkaasi.
Magaalada Beydhabo, waxaa maanta ka soconaya is-diiwaangallinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka maamulkaasi.
Shalay guddiga doorashada goddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed ayaa soo saaray jadwalka murashxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur galbeed, waxaana wali jirin murrashax wali si rasmi ah isugu soo sharaxay xilkaasi.
Maalinta berito ah waxaa ku eg is diiwaangalinta murashaxiinta guddoonka baarlamaanka Koonfur galbeed, waxaana 1-da April la filayaa in ay dhacdo doorashada guddonka baarlamaanka maamulkaasi.
Dhowr musharax ayaa u taagan xilka guddoonka Baarlamaanka balse ilaa iyo hadda lama saadaalin karo qofka kusoo bixi kara doorashada guddoonka Baarlamaanka. Siyaasiyiin hore iyo kuwo cusub ayaa kamid ah xildhibaannada isku soo sharxaya guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen.
Wasiir Goodax Bare oo u jawaabay Xildhibanno ka hadlay in la xiro dugsiga sare ee 15 May ee ay gacanta ku haysay Masar?